ISidlo sokulahleka kwesisindo
Uninzi lwethu aluqhelani nemikhwa emihle yokutya, kwaye ngenxa yolu ngxaki yokunyuka ngokweqile kunzima kakhulu. Njengomthetho, yinto yokugqibela yokutya, okufuneka ibe yinto elula, yinto enzima kakhulu kwaye inobungozi. Isondlo esifanelekileyo sokusilahleka kwesisindo siya kusombulula loo ngxaki.
Ngaba ndingakwazi ukunciphisa umzimba ngaphandle kokutya?
Abaninzi bakholelwa ukuba indlela yodwa yokunciphisa ubunzima kukunamathela kwisidlo sokutya "sokunciphisa isidlo" . Oku kunyanisweni, kuba ukuba ukutsalwa kwe-caloric yokutya kususwe, ke ukutya kwe-caloric yokutya kwansuku zonke kuyancipha, kwaye ukuwa kwesimo sokulala kungeke kulahle yonke imikhosi yalo kumzabalazo wokutya okukhulu.
Nangona ukuba ukulahlekelwa isisindo ngokungafuni ukudla isidla ngokulula, awukwazi ukuhamba ngumbingelelo onjalo, kodwa khetha nje isidlo sesidlo sokunciphisa umzimba. Kwabaninzi, oku kuya kuba lula kunokuphulaphula isisu esiswini, ngoko ungawugxothi lendlela. Ukunciphisa ubunzima kule meko, awuyi kuba nzima ngokungathi uzama ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kokutya, kodwa kuya kuba lula ukuwaphula ngoku.
Ukutya okulula ukulahlekelwa isisindo
Okokuqala, kuyafaneleka ukuba sifunde ukuba isidlo esingcono kakhulu sokulahleka kwesisindo asithethi isidlo sakusihlwa. Kukho izitya ezininzi ezinokuthi ungadla ngokuhlwa kwaye uqhubeke ulahlekelwa isisindo. Phakathi kwazo:
Inyosi ibhaka kwi "sleeve" ngeengqungquthela kunye neklabishi echitshiweyo.
Iphakethe ye-fatty-free cottage cheese exutywe nehafu yeglasi ye-1% kefir kunye nayiphi na iberry.
Ubisi lwe-inkukhu ebilisiwe kunye ne-broccoli okanye i-cauliflower.
Inkukhu edibeneyo kunye nokuhlobisa kwamakhukhamba amatsha kunye netamatato.
Umququ kunye nemifuno (iklabishi, isitshalo seqanda, i-zucchini, utamatisi, intsimbi yezonwele, anyanisi) kunye nama-mushroom.
I-Cottage ushizi, ixutywe namaapulo abhekile kwaye ibhaka ehovini.
Izindonga ze-zucchini, ezibhalwa ngumncinci wenkomo yomhlaba.
Isaladi evela kwenkomo yenkomo, ikhukhamba, utamatisi kunye neelayiki.
Isaladi ye-Shrimp ne-Peking iklabishi ngeengubo ze-lemon ne-bhotela.
Amaqanda aphekiweyo okanye "i-egg patties" kunye ne-Peking iklabishi.
I-chicken roll kunye nokuhlobisa iklabishi entsha yePeking.
Intlanzi ebhaka kwi-foil, kunye nokuhlobisa irayisi ebomvu.
Inyosi ebilisiwe kunye nokuhlobisa imifuno eluhlaza.
Isifuba se-Chicken sitshiswa nge-zucchini.
Ubhontshisi kwi-tomato sauce kunye nesaladi yemifuno kunye namaqabunga.
I-Turkey nge-sauerkraut kwisitya esicaleni.
Intlanzi ye Braised kunye nemifuno yemifuno.
Isobho se-cheese ekukhanyeni kunye nemifuno namakhowa.
Ukusebenzisa isidlo esiluncedo sokulahleka kwesisindo imihla ngemihla, kunye neminye imibono eboleka isidlo sasemini, uya kuba lula, ukondlo olufanelekileyo kwaye ulahlekelwe isisindo ngaphandle kokuphazamiseka.
Ukupheka i-ginger ukulahleka kwesisindo?
Imveliso efanelekileyo kwiinkqubo zabantu kunye nezitho - zitya kunye nenzuzo!
Ubisi lweebhokhwe lukulungele umzimba kunye nokuchasene
I-Compote ye-rhubarb-enhle neyobubi
Isiraphu ye-artichoke yaseJerusalem - emihle neyingozi
Isonka se-Borodino sihle kwaye sibi
Iiladi eziphantsi kweekhalori zokulahleka kwesisindo kwimveliso elula
Bulimia: njani ukulahla?
Ijusi lomphunga - izakhiwo ezincedo
Isibindi sesilwanyana - umxholo wekhalori
Cocktail yeGreen Slimming
Ziziphi iichips eziyingozi?
I-mursal tea - izakhiwo ezincedo
I-Serum - izakhiwo eziwusizo
UKimchi wasePekinese iklabishi
Indlela yokwenza i-highchair yokondla?
IFashion ye-Women Full Full 2014
Indlela yokwenza umhluzi obala?
Ukuguqula i-arthrosis yomxube we-hip
Izinketho zokudibanisa amaphephadonga
Ukucinga Okufanelekileyo - Ukuzivocavoca
Ukukhulelwa kubonakala nini kwi-ultrasound?
Ungasusa njani indlebe ekhaya?
Iifologi ezifudumele ekhaya
I-Celery - umxholo wekhalori
Iibhululo zeebhululo - iimodeli eziphathekayo kunye nezetekisi
I-anemia ye-1 degree xa ukhulelwa
Tyelelo e Ufa
Indlela yokondla i-peonies entwasahlobo-yintoni isichumisi esifanele senziwe?
Indlela yokuhlambulula izihlathi zakho?
UFrey Wille - iingubo ezifanelekileyo kunye nezinto ezivela kwi-brand eyaziwayo yehlabathi